Kelmada wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka tidhi xuska ka hortaga tacadiyaadka kadhanka ah haweenka. – MESAF
News & Events News Kelmada wasiir ku xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha ay ka tidhi xuska ka hortaga tacadiyaadka kadhanka ah haweenka.
Kufsigu aad ayu uso baatey. Kufsigu wuxu ka mid yahay dhibaatoyinka hablaha so gaadha ee waligood aan ka hadhin. Mustaqbalkooda iyo guurba wuu seejiya. Waa inan la fududaysan oo gacan adag lagu qabta. Gabadh kasta reer bay ka dhalatey qofna ma jecla in la xumeeyo walaashi ama hooyada. Madaxda halkan joogta maanta waxaan ka codsanaya inay gacan weyn ku yeeshan cidhibtirka kufsiga iyo dhamaan tacadiya dumarka la xidhiidha. Waxaan ka codsanaya bahda saxaafada inay kaalin ku yeeshan wacyigalinta oo ay umada ku bararujiyaan dhibtan mugta ay leedahay.” – Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Xananada Xoolaha & Kaluumaysiga, Marwo Yurub Abiib Abdi